Tafakatra 26 izao ireo tratran’ny coronavirus: niampy telo ny voa, avy amin’ny fifampikasohana ny iray | NewsMada
Par Taratra sur 28/03/2020
Olona telo hafa indray, omaly, no voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus, araka ny tatitra nataon’ny Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, mpitondra tenin’ny Centre de Commandement Opérationnel (CCO). Araka izany, tafakatra 26 izany izao ireo olona mitondra ity valanaretina coronavirus ity, hatramin’izao.
Tamin’ny alalan’ny fitiliana (prélèvement) niisa 11 amin’ny 120 natao teo anelanelan’ny alakamisy 26 marsa 2020, tamin’ny 8 ora maraina hatramin’ny omaly antoandro, nataon’ny Institut Pasteur de Madagascar no nahitana izany. Momba ilay tranga vaovao voalohany, omaly maraina, fantatra fa lehilahy 32 taona izy io. Tsy anisan’ireo mpandeha tao anatin’ilay zotram-piaramanidina Air France vao tonga farany teny Ivato, ny faran’ny herinandro teo akory ity olona ity fa teto an-toerana ihany, nifanerasera tamin’ny sasany tamin’ireo mpandeha fiaramanidina. Izany hoe, tamin’ny alalan’ny fifampikasohana no nahazoany ilay valanaretina. Izay ilay antsoina hoe « cas contact » na koa hoe “cas témoin”.
Ny tolakandro, tamin’ny 6 ora, niverina nanao tatitra indray ny teo anivon’ny CCO, ary nanambara fa misy tranga roa hafa indray voatily fa mitondra ity valanaretina coronavirus ity. Vehivavy 21 taona ny iray, izay nandeha tamin’ny zotram-piaramanidina Kenya Airways, ny talata 17 marsa 2020 lasa teo. Mbola vehivavy ihany koa ny faharoa, izay nandeha tamin’ny zotram-piaramanidina Air Mauritius (MK), ny alarobia 18 marsa 2020. Izay no fantatra momba ireto olona roa farany ireto.
Nambaran’ny mpitondra tenin’ny Foibem-pibaikoana ny coronavirus, ny Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, tamin’ny fanazavana nataony omaly tolakandro fa mbola mitohy, ary mbola andrasana ny valin’ny fitiliana 109 tamin’ireo 120 nalefa teny anivon’ny Institut Pasteur de Madagascar, omaly.
Amin’ireo olona 26 voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus, efatra amin’izy ireo, araka ny fanazavana no nahitana soritr’aretina reradreraka, manakotsako vanin-taolana, ary mikoha-maina. Ilay marary iray izay voalaza fa tratran’ny fahasemporana koa dia nambaran’ny Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana fa efa mba nitonitony. Notsipihiny tsara kosa, tetsy an-danin’izay fa tsy mbola nisy namoy ny ainy fa velona soa aman-tsara ireo marary 24 voamarina fa mitondra ity valanaretina ity ary arahi-maso akaiky ny fivoaran’ny fahasalamany.
Toy ny fanaony isaky ny milaza tatitra, nanao fanentanana hatrany ny amin’ny tokony hahamailo ny olon-drehetra sy hanajana fatratra ireo fepetra fiarovana efa napetraka ny tenany. Iray sady ny lehibe indrindra amin’izany dia ny tokony tsy hivoahana ny trano. Io ilay lazaina hoe “fihibohana”. Ity tranga vaovao voamarina farany, omaly, ity mantsy dia porofo mitohoka amin’ny tendany fa ampy hifindran’ity valanaretina ity tokoa ny fifampikasohana na fifaneraserana. Izay no tokony hahamailo tanteraka ny rehetra.
Fantatra fa efa tonga soa aman-tsara eto Antananarivo, omaly, kosa ny olona iray, voalaza fa nahitana tranga mampiahiahy « cas suspect », izay somary nampisavorita-tsaina ny tany Fianarantsoa. Efa eo am-pelatanan’ny mpitsabo izy io ary efa eo an-dalana ny fanaraha-maso ny fahasalamany sy ny hanaovana fitiliana azy.
Handinika ny lalàna momba ny toaka gasy ny loholona 29/05/2020
Hentitra ny filankevitry ny minisitra: mila arahi-maso ireo fepetra iadiana amin’ny Covid-19 29/05/2020
Betongolo, Mahamasina, Alakamisy Fenoarivo: mirongatra eny amin’ny faritra be olona ny Coronavirus 29/05/2020
Nodimandry ny lehiben’ny faritra Analanjirofo 29/05/2020
Mila mahay miserasera 29/05/2020